Maxay ahaayeen labada Hindise Sharciyeed oo ay maanta meel mariyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya? | HalQaran.com
Maxay ahaayeen labada Hindise Sharciyeed oo ay maanta meel mariyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya?
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Feeraalka Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo kulanka shir guddoominayay ayaa ugu horeyn ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la’aan ah loo joojiyo dagaal beeleedyo khasaare badan dhaliyey oo kasoo cusboonaaday deegaanno ka tirsan Gobolka Mudug, sidoo kalena maamulada Puntland iyo Galmudug ay dib u heshiisiin dhex dhigaan walaalaha ay dirirtu u dhaxeyso.
Sidoo kale Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa u codeeyay labada heshiis ee kala ah Heshiiska Illaalinta Hidda Dhaqameedka aan la taaban karin iyo sidoo kale Heshiis khuseeya Ilaalinta Hiddaha Dhaqanka iyo Hiddaha Dabiiciga ah, waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulanka shir Guddoominayay.
“140 Xildhibaan ayaa haa ku ogolaatay, afar kalena waa ay ka aamuseen mana jirin cid diiday, sidaas ayuuna ansax ku yahay labada Hindise sharciyeed ee kala ah Heshiiska Illaalinta Hidda Dhaqameedka aan la taaban karin iyo sidoo kale Heshiis khuseeya Ilaalinta Hiddaha Dhaqanka iyo Hiddaha Dabiiciga ah,” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Intaasi ka dib Mudanayaasha Golaha ayaa sii amba qaaday ka doodista Akhrinta labaad ee Sharciga Doorashooyinka Qaranka, waxaana Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu sheegay in maadaamaa sharciga Doorashooyinka Qaranka muhiim yahay goluhu uu maalin walba ka shaqeyn doono.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa fikradahooda ka dhiibtay sharciga doorashooyinka Qaranka oo maalmahan ay mudanayaasha si adag uga doodayeen Xildhibaannada.
Guddoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in dooda ku saabsan sharciga Doorashooyinka Qaranka lagu sii amba qaadi doono kulanka kan xiga.
labada Hindise Sharciyeed oo ay meel mariyeen Xildhibaanada golaha shacabka